Filohan'ny Skål International Bangkok: safidy hafa amin'ny quarantine tsy maintsy atao
Home » Travel Associations News » Filohan'ny Skål International Bangkok: safidy hafa amin'ny quarantine tsy maintsy atao
Tena be fanantenana aho amin'ny indostrianay sy amin'ny hoavin'ny SKÅL International andraikitra amin'ny maha-mpitarika amin'ny raharaham-barotra sy ny finamanana mandray vahiny.
MEMBERS malala sy sakaizan'ny SKÅLBKK
Faly be aho fa afaka manantona anao anio.
Te hampahafantatra ny mpikambako rehetra aho fa samy mahalala ny fotoana mahatsiravina iainanao. Ampahafantaro anao koa fa tsy irery ianao. Te-hiteny an'io nandritra ny herinandro maro aho, na izany aza, tamin'ny volana lasa teo ny fameperana ny fivoriana (tena marina) hanampiana ny fihenan'ny aretina avy amin'ny cluster Samut Sakhon dia tsy azo natao mivantana.
Soa ihany fa toa mandeha ny fameperana ary manomboka esorina tsy ho ela ny fameperana.
Toa mihena ny areti-mifindra vaovao isan'andro any Bangkok, saingy mbola miatrika fanamby goavana i Thailand sy izao tontolo izao. Amin'ny maha indostria anay dia niaina salan'isa ambany noho ny trano izahay, very asa ary nikatona ny orinasa.
Mino tanteraka aho fa mila safidy hafa amin'ny quarantine voatery ny indostria. Raha mbola misy quarantine karazana ho an'ireo mpitsidika any ampitan-dranomasina dia tsy hanomboka sitrana ny indostria misy antsika. Na izany aza, ny fitsapana sy ny fanaovana vaksiny angamba no valiny hanampy hisokatra ny sisin-tany.
Ny fanarenana dia hitranga na dia miadana aza. Ny indostria ankoatr'izay koa dia miantso vonjy amin'ny fanampiana ara-bola avy amin'ny governemanta mba ho velona.
Ho an'ny fahombiazantsika amin'ny ho avy dia tokony ho afaka hihazona sy hamerina handamina ny mpiara-miasa amintsika isika, hamelombelona ny orinasam-pitetezana eto an-toerana ary hamerina ny toekarentsika.
Na dia mbola tsy manomboka aza ny fanolorana vaksinina dia mety haharitra amam-bolana maro ny hizarana betsaka, ary tsy antenaina hiverina intsony ny dia raha tsy manomboka ny vaksiny.
Niato ny indostrian'ny fizahantany. Milamina sy mandaitra Covid-19 vaksinina dia midika fa ny fiainana, ao anatin'izany ny dia, dia mety hiverina amin'ny laoniny indray andro any.
Tsy ny orinasa rehetra no noterena hanidy akaiky nefa ny tsy fahazoana antoka ara-bola mivelatra dia midika fa nitolona ny indostrian'ny fizahantany tamin'ny taona lasa. Masiaka izany, na izany aza heveriko fa na dia mahazo ampahany kely amin'ireo mpizahatany 39 tapitrisa amin'ny 2019 aza isika dia afaka miaina sy mivoatra.
Ny tanjona fohy dia ny fahavelomany ary avy eo manomboka miroborobo ao amin'ny 'tontolo vaovao' fizahan-tany. Ny famerenana REHETRA izay very dia tsy zava-misy na azo tanterahina ary tsy tokony ho tanjona.
Avy amin'ny tabilao iray manontolo dia tianay ny milaza fa tena ao an-tsainay ianao. Amin'ny fotoana toy izao dia zava-dehibe ny maha-mpikambana ao amin'ny SKÅL. Ny fotoanan'ny krizy dia tsy tokony hiteraka fitokanana sy fihatahana amin'ireo mpiara-miasa amin'ny indostria. Eto Bangkok, ny tontolom-panohanana atolotry ny Skal vao maika lasa mifandraika amin'ireny fotoan-tsarotra ireny. Tena be fanantenana aho amin'ny indostrianay sy amin'ny hoavin'ny SKÅL International andraikitra amin'ny maha-mpitarika amin'ny raharaham-barotra sy ny finamanana mandray vahiny. Miara-matanjaka kokoa isika!
Ny filoha Biden dia nanao sonia ny baiko mpanatanteraka izay manome baiko ny saron-tava amin'ny sidina fiaramanidina
Ny US Travel dia nidera ny baikon'ny filoha Biden momba ny dia